हाम्रो नेपाल मा : HAMRO NEPAL MA: आई डन्ट युज पोलिथिन ब्याग्ज
आकार June 14, 2009 at 4:53 PM
हैन यार, तपाई ले साह्रै हसाउँनुहुन्छ, सँधै लेख्दा । यस्ता खुवि हामीलाई नि सिकाए, हामी नि प्लाष्टिक का झोला छोड्थ्यौँ कि ?
Neeti Aryal Khanal June 15, 2009 at 3:58 AM
Basanta June 16, 2009 at 5:32 AM
राम्रो र रमाईलो कुरा एकलकाँटे ब्रोको!
यता जापानमा पनि प्लाष्टिकको थैलोमा पैसा लाग्न थाल्या' छ केहि महिना यता बाट। त्यसैले म पनि एउटा कार्यक्रममा पाएको कपडाको झोला (सेतो छ है मेरो चाहिँ) सधैं साथमा राख्छु।
यो भाटभटेनी स्टोर मेरो पनि 'फेभोरेट' स्टोर थियो नेपाल बसुञ्जेल। घरबाट त्यति नजिक नपरे पनि त्यहिँ जान मन लाग्थ्यो। ब्रोले भनेजस्तै "त्यहाको एयर कण्डीशन, कस्मोपोलीटन वातावरण, अनि सुन्दर युवतीहरुको जमघट---" ले पनि तानेको हुनुपर्छ त्यो बेलाँ':)
Dilip Acharya June 16, 2009 at 5:58 AM
रमाईलो पोष्ट गयो फेरी ।
प्लाष्टिकको झोला नबोक्ने सचेतना संगै 'एकलकाँटे' मात्रै नाम राखेर बाटोमा देखे पनि चिन्न मुश्कील बनाउनु भएको थीयो, अब भने कतै देखीनु भयो भने चाही सजिलै चिन्छु ! (तर त्यो कालो कपडाको झोला भने कायम राख्‍नु होला :)।
"एक पटक हर्लिक्स किन्दा फ्री मा आएको ..." वाक्य पढ्दा भने साह्रै हाँसो लाग्यो ।
एकलकाटे June 16, 2009 at 8:16 AM
प्रोत्सहनको गरेको मा साथीहरुमा आभार
आकर ब्रो, भने छि प्लस्टिक छोडन मलाई कती गाह्रो भएको छ बुझिदिनु भएको मा धन्यवाद हेर्नु न हिजो त बिर्सेंछु पो
बसन्त ब्रो, यो सबै फेसन बिदेश बातै त सिक्ने हुन नेपाली ले जापानि हरु बातावरण प्रती सचेत छन भन्ने सुनिन्छ एसो तपाईंको अनुभव पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो सुन्दर चीज को पारख गर्ने ब्रो को र मेरो बानी चाँही मिल्दो र छ है हेहेहे
थ्यांक यू वेरी मुच नीति जी
दीलिप ब्रो,साच्चै गाह्रो पो र छ यो प्लस्टिक को झोला प्रयोग नगर्न तपाईंले कायम राख्नु भनेको बुझ्दैछु अनी त्यो फ्री मा आको हर्लिक्स को झोला मलाई धोती न टोपी भयी राथ्यो हेहेहे